I-Horoscope ngo-2010 ngamanqamana azalwa ngonyaka we-tiger
Sinikela ingqalelo kwi-horoscope ye-2010 yee-cancer ezizalwe ngonyaka we-tiger.
Ukususela ngoAgasti 24 ukuya kuSeptemba 2. Le minyaka elishumi iya kuba nokuthula ngokubambisana kwakho nothando. Uncokola kakhulu ngekhethiweyo yakho, kwaye, ngokusemgangathweni, yonke into iya kwakha intsapho (okanye iqinisa ikhona ekhoyo). Kodwa kukho iingxaki ezinokubambisana, ngokukodwa ezi ngxabano kwiingqikithi "indlu" kunye "nomsebenzi", kwakunye nomnqweno wokulawula nokubeka iinjongo zabo kwiqabane. Unzima ngosuku-Agasti 28, oluhle - uAgasti 30. Ukususela ngo-3 ukuya ku-12 kuSeptemba. Ubunzima buqhubeka kwiinkalo ezininzi zobomi kwangoko, kwaye oku kunokuchaphazela kakubi ubudlelwane. Kodwa kunokwenzeka ukuba, okhethiweyo uya kukwazi ukukuxhasa nokukhusela. Usuku olunzima kakhulu - ngoSeptemba 3, iimvakalelo zingagcwalisa indebe kwaye ziqhume, zizame ukulimaza abathandekayo bakho. Kodwa ngoSeptemba 11 no-12 kuya kuba mnandi kakhulu kuluthando nokuzonwabisa. Ukususela ngomhla we-13 ukuya kwe-22 kuSeptemba. NgoSeptemba 13 lusuku oluhle lwemihla yokuthandana. NgoSeptemba 16 no-17 imvelaphi yeemeko ezintle ingasetyenziselwa ingxoxo ebalulekileyo kunye neqabane-mhlawumbi, uya kukwazi ukufezekisa injongo. Ungalibali ukuphulaphula omnye kwaye uqonde imbono yakhe. NgoSeptemba 19, kunokubakho ubunzima ebomini obusondeleyo, kwaye ngomhla wama-20 kuya kuba lula ukuvula yonke into entsha kule ndawo. Unokuhlala elunxwemeni lolwandle okanye umlambo - kuba ngoSeptemba kusefudumele, kwaye yonke into ikhumbuza ihlobo. Yaye ukuba imvula, kufihla ndawonye phantsi kwe-ambulera, ukuhamba okunjalo kuya kukusondeza. Ukugqiba ngokuhlwa owufunayo, ewe, kwindlu epholileyo.
Indlu isasesikhundleni sakho. Iingxaki ezivela kweli xesha kufuneka zixazululwe ngokukhawuleza, zenze imizamo eninzi. Kungenzeka ukuba uya kuncedwa ngabahlobo-mhlawumbi, baya kubakho tyelela. Ukuxhatshazwa kwintsebenziswano kunye nabazali kunye nezinye izihlobo ezindala azifakiwe, ukungavumelani kungavela phakathi kwabo kunye neqabane lakho. Konke oku, okwenene, akunakufaka isandla kwisimo esihle, kodwa uzame ukungayithandi. Iintsuku ezinzima kakhulu ngoSeptemba 3 no-9. Kodwa ubudlelwane nabantwana bukhula kakuhle, kwaye uvuyo lokuthetha nomntwana, ngakumbi ngoSeptemba 12-15, lunokubuyisela ubunzima kwezinye iindlu zekhaya.
Impilo yakho iya kuxhomekeke kakhulu kwimvakalelo yakho kunye nokuziqonda kwangaphakathi. Ngeli thuba, uya kuba neengxaki ngokugxeka ngaphandle, ukutshatyalaliswa kweengcamango zakho kunye neengcamango, ukungalindelekanga kwimbono yakho. Konke oku kunokubangela iintlobo zeempawu zesifo somzimba. Olu hlobo luya kucacisa ngakumbi ukususela ngoSeptemba 10. Ukuze ugweme uxinzelelo, zama ukungawunxi. Ukubuyisela kunokuthatha ixesha elide kakhulu. Ukutya kwe-apula kunokukunceda ukuba ufumane isethi efunekayo yamavithamini.
Ngoku ufuna ukuphumla kunanini ngaphambili, kwaye kulungile kakhulu ukuba unokuthatha umhlalaphantsi kwaye unqamule kwi-bustle. Kubaluleke kakhulu ukwenza oku ngoSeptemba 1-2, kunye neentsuku ezimbini ezilandelayo, nawe, akufanele ube kwindawo kawonkewonke, ufuna ngokwenene "indawo yokuhlala". Akufuneki ukucwangcisa uhambo olude, ngakumbi ngo-Agasti 25, kodwa ukuba unqwenela ukuya kwiholide, ukhethe ukuqala ukuhamba ngo-Agasti 30-31. Uhambo olunifutshane lunokwenzeka, zama ukusondela ngeveki, ngokukodwa ukulungele oko ngoSeptemba 8-9. Kwakhona kubalulekile kule nyanga ukuzinikela ixesha lokuzifundela, funda ngaphezulu. Ilitye elihlambulukileyo lehlathi, emanzini onokubukeka ngathi kwisibuko, liya kukubonisa amandla akho, ubuyisele amandla angaphambili kwaye uncede ukujamelana noxinzelelo.
Imeko yezemali isomelele. Kuninzi kuxhomekeke kubafowunelwa oza kubopha kule nyanga nabantu abalungileyo. Kwakhona ujonge ingqalelo kwiintengiso, ukuthengiswa kunye nento yonke eya kukunceda ukuphuhlisa ishishini lakho. Kungenzeka ukuba kule nyanga uza kuthethwa ukuphakanyiswa (malunga no-Agasti 27), kodwa oku kuwukuqala kuphela, kwaye umphumo wangempela uza kubonakala ngeenyanga ezimbalwa. NgoSeptemba 14, zizinyame kwaye ungangeni kwimpikiswano kunye noogxa. Ngo-Agasti 28, ubeke intetho ebalulekileyo kunye nabasemagunyeni. Iimveli zincwadi zikulindele kuwe. Umthamo ogqithiseleyo weengoma zengoma uya kuba yisipho esivela kuwe.
Konke kuhamba kakuhle, nangona unengxaki yokuthetha nawe kunye nokwakha ubudlelwane. Kuye, uthando luyimfanelo enkulu, engayidinga ixesha kuphela. Ulungele isinyathelo esinqumayo. Ukuba oku kuhambelana neminqweno yakho, uze uyixhase, kwaye uya kufumana umyeni onobubele nozinikeleyo.
Iimbangela zokuxhalabisa umdlavuza usenokukwazi ukufumana ngokoqobo ukusuka ekuqaleni. Ngenxa yoko izifo ezingenakuqondakala kunye nempilo enempilo. Usuku olunzima - ngoSeptemba 3, ukukhululeka ngokomzwelo kunokwenzeka. NgoSeptemba 14 impilo ingashukunyiswa ngenxa yokugqithisa umthwalo emsebenzini, kuyafaneleka ukuphumla.
Le nyanga imeko iyavuya. Imali emivuzo iya kunceda unxibelelwano olusebenzayo, i-fortune iya kumphonsa amaxabiso aphumelelayo, abathengi abathembekileyo, ulwazi oluncedo. NgoSeptemba 6-7, unokwenza izinto ezibalulekileyo. Ingozi yemali iya kulandela uSeptemba 19 no-20.
Ekusebenzeni, akukho nkxwaleko ekhethekileyo ebonelelwe, ngaphandle kobunzima ngomhla kaSeptemba 14, xa ukungavumelani kunye nabo basebenzisana nabo. Abo basebenza nabathengi, kukufanelekile ukunciphisa inani loonxibelelwano ngaloo mini. Kulo msebenzi kukho ukwanda, unokufumana isiphakamiso esithembisayo, kodwa ukuphunyezwa kwakhe akuyi kusondela.
Eli lixesha elihle lokumema abahlobo ukuba batyelele kwaye baququze iiholide ezincinci. Iintsuku ezilungileyo ezi zi-30 nangama-31 ku-Agasti. Kuya kuba lula ukuthetha no-Aries kunye neTaurus, nzima kakhulu - kunye neLibra.
Qaphela ukuba ngoSeptemba 1-2, wayenethuba lokuphumla kuzo zonke, kuquka nawe. Oku kuya kunqanda ukuxhatshazwa koxinzelelo kwiintsuku ezilandelayo.
I-horoscope yenyaniso ye-archer 2010
I-Horoscope yabaculi be-tiger
IHososcope ngo-2011 iSagittarius
Iimpawu zeengcongolo zomqondiso we-zodiac
I-Horoscope yezikali zanamhlanje, ngonyaka ka-2010
I-horoscope echanekileyo yo-2010 - umfazi waseTaurus
Abantu abazalwa ngonyaka wenkamba
Unganikela ngemali yomtshato?
Indlela yokwenza idoli kwakhona
Inwele ehlala ixubileyo
Indlela yokusebenzisa i-eyeliner emhlophe
Ngemiqolo okanye ebhokisini: iimpapasho zefestile kwiingubo zonyaka we-Spring-Summer 2016
Inzuzo yoNyaka yeeFashion zeZikolo zeParsons
Ubuhle beqhwa: inqabileyo ye-Snow Maiden intombazana enezandla zakhe
UJoseph Prigozhin wayeqhayisa ngomzimba omzimba kaValery
I-biscotti ye-tshokolethi eneemalmond